SAMOTALIS: TACSI KA TIMID LA-TALIYAHA MADAXWEYNAHA EE DHAQAALAHA AXMED CARWO
TACSI KA TIMID LA-TALIYAHA MADAXWEYNAHA EE DHAQAALAHA AXMED CARWO
TACSI GEERIDA XILDHIBAAN AXMED IBRAHIM DAAHIR
XILDHIBAAN AXMED IBRAAHIM DAAHIR (AXMED WEYNE) ka tegay meel kasta oo ay joogaanba . Sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa shacbi weynaha Somaliland , gaar ahaan Golaha Wakiilada, Xukuumadda iyo Xisbiga Kulmiye, gobalka Maroodijeex.
XILDHIBAAN AXMED IBRAAHIM DAAHIR (AXMED WEYNE) waxaan aqaanay ilaa caruurnimadii Hargeysa iyo Baligubadleba.
Waxuu ahaa hormood siyasadeed una dhashay geesinimo iyo hadal cad. Nin madax banaan oo xilkiisa aan cidna u dabo-fadhiisan, nin saaxiibnimo leh oon abaalka iloobin, bulshaawi asxaab badan iyo nin kaftan aqoon ah. Waxuu ahaa xildhibaankii xisbiga Kulmiye ugu codka badnaa, isagoo matalaaya shacbiga gobalka Maroodijeex.
Waxa lagu xusuustaa siduu ugu adkaa mabda'iisa oo uu aad uga dhex muuqan jiray Golaha Wakiiladda iyo madasha siyaasi. Ma ahayn kuwa xilka magac uun u sita, ee waxuu ahaa xubin firfircoon oo aad u muuqda.